ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ | Commerce
ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ပြည်တွင်းတွင် SKD/ CKD စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်Safety ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေငြာခြင်း
Fri, 08/23/2019 - 08:59 -- ictuser
ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ပြည်တွင်းတွင် SKD/ CKD စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်Safety ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါသတ်မှတ်ချက် အတွင်း လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်-
Engine Power (Max) - 450 cc
Diesel Engine ဖြစ်ပါက (1 Cylinder)
ယာဉ်အလျား (Max) - 4250 mm (13.9ft)
ယာဉ်အနံ (Max) - 1500 mm (4.9ft)
အမြင့်(Max) - 2000 mm (6.5ft)
သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ် - 500 kg
လူစီးသုံးဘီးမော်တော်ယာဉ် -5P (ယာဉ်မောင်းသူအပါအဝင်)
ဝင်ရိုးအရေအတွက်(Max) - (2) Axle
Axle Capacity (Max) - 1000 kg
Tyre Size (Max) - 5.00 -12
အထက်ဖော်ပြပါကန့်သတ်ချက်များမှာအများဆုံးခွင့်ပြုမည့်ကန့်သတ်ချက်များဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်ပြီးယာဉ်တစ်စီးချင်းစီအတွက်မူလထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသည့်စက်ရုံ ထုတ်Specificationပါသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းတိကျမှန်ကန် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။
Specificationများကိုစိစစ်ရာတွင်ယာဉ်သည်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားသောမူလစက်ရုံထုတ်ယာဉ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ပါကCatalogueမူရင်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်း(Government Body)မှ ထုတ်ပေး ထားသော Type Approval Certificate များပူးတွဲတင်ပြနိုင်ရမည်။
Latest New တင်ရန်
Read more about ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ပြည်တွင်းတွင် SKD/ CKD စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်Safety ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေငြာခြင်း
(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၃)ခုစာရင်း
Wed, 08/07/2019 - 07:06 -- ictuser
၂၀၁၂ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့်၂၀၁၅ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအခန်း(၁၁)၊ပုဒ်မ(၃၈)ခုတွင်မည်သူမျှပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိယင်း၏ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟုပြဌာန်းထားရှိပါသည်။ ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကိုပို့ကုန်များသင်္ဘာတင်သည့်နေ့မှ(၆)လအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းအသီးသီးသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်တာဝန်ရှိပါသည်။၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်းပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက်ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိသည့်
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမည်/ဒါရိုက်တာအမည် ပသကအမှတ် မှတ်ချက်
1 Fine Ply Myanmar Private Ltd. Mr.Ashok Garg 32835
2 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd. U Soe Yin 25250
3 Kyaw San Co., Ltd. U Kyaw Oo 17343
Read more about (၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၃)ခုစာရင်း
(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၇)ခုစာရင်း
Wed, 07/31/2019 - 07:16 -- ictuser
2 Golden Lace Co., Ltd. U Thaung Win 16551
3 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd. U Soe Yin 25250
4 Kyaw San Co., Ltd. U Kyaw Oo 17343
5 Myanmar Rice Trading Co., Ltd. U Thant Zin 14014
6 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd. U Sai Win Hlaing 16348
7 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein 43124
Read more about (၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၇)ခုစာရင်း
(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၁၃)ခုစာရင်း
Fri, 07/12/2019 - 09:19 -- dotadmin
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း (၁၁)၊ ပုဒ်မ (၃၈) ခုတွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။ ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘာတင်သည့်နေ့မှ (၆) လအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအနက် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသော ကုမ္ပဏီ(၄၀)ခု ရှိကြောင်း ဗဟိုဘဏ်မှ အကြောင်းကြားလာရာ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ(၄၀)ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ၂၀၁၉ ခုနစ် ဇွန်လ (၆)ရက်နေ့မှစ၍ ၀န်ကြီးဌာန website မှတဆင့် အသိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၁၁.၇.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါစာဖြင့် နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ (၆)ခုတို့မှ ပို့ကုန်ရငွေများ အပြည့်အဝ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြား လာပါသဖြင့် ယခင်ကုမ္ပဏီ(၁၉)ခု အစားကုမ္ပဏီ(၁၃)ခုစာရင်းအား သိရှိနိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမည်/ဒါရိုက်တာအမည် ပသကအမှတ်
1 Aung Naing Thitsar Co., Ltd. U Aung Zaw Oo 19674
2 Cornerstone Resources (Myanmar) Ltd. U Swe 13417
3 Fine Ply Myanmar Private Ltd. Mr.Ashok Garg 32835
4 Global Moving And Storage Ltd. U Rudra Kumar 34865
5 Golden Lace Co., Ltd. U Thaung Win 16551
6 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd. U Soe Yin 25250
7 Kyaw San Co., Ltd. U Kyaw Oo 17343
8 Lighthouse Enterprises Ltd. Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin 3187
9 Myanmar Rice Trading Co., Ltd. U Thant Zin 14014
10 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint 21154
11 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd. U Sai Win Hlaing 16348
12 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay 21108
13 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein 43124
Read more about (၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၁၃)ခုစာရင်း
(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၁၉)ခုစာရင်း
Fri, 07/12/2019 - 04:01 -- dotadmin
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၈.၇.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါစာဖြင့် နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ (၂)ခုတို့မှ ပို့ကုန်ရငွေများ အပြည့်အဝ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြား လာပါသဖြင့် ယခင်ကုမ္ပဏီ(၂၁)ခု အစားကုမ္ပဏီ(၁၉)ခုစာရင်းအား သိရှိနိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
1 Arkar Oo Co., Ltd. U Myo Lwin 11518
2 Aung Naing Thitsar Co., Ltd. U Aung Zaw Oo 19674
3 Cornerstone Resources (Myanmar) Ltd. U Swe 13417
4 Fine Ply Myanmar Private Ltd. Mr.Ashok Garg 32835
5 Global Moving And Storage Ltd. U Rudra Kumar 34865
6 Golden Lace Co., Ltd. U Thaung Win 16551
7 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd. U Soe Yin 25250
8 J & M Steel Solutions Co.,Ltd. Mr.Yasuhisa Miwa 32182
9 Kyaw San Co., Ltd. U Kyaw Oo 17343
10 Lighthouse Enterprises Ltd. Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin 3187
11 Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd. Mr.Wang Xiaowei 23414
12 Myanmar Rice Trading Co., Ltd. U Thant Zin 14014
13 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint 21154
14 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd. U Sai Win Hlaing 16348
15 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay 21108
16 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein 43124
17 Thein Than Kyei Sin Co, Ltd. U Kyin Sein (a) U Kyi Sein 24090
18 Trade Friends Trading Co.,Ltd. Daw Shin Shin Nyein 25966
19 Win & Win Co., Ltd. U Win Swe 12394
Read more about (၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၁၉)ခုစာရင်း
Thu, 07/11/2019 - 03:57 -- eiprdep
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား Update ပြုလုပ်ရန် အသိပေးကြေညာခြင်း
Read more about ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၄/၂၀၁၉)
(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၂၁)ခုစာရင်း
Mon, 07/01/2019 - 09:54 -- dotadmin
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၂၇.၆.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါစာဖြင့် နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ (၉)ခုတို့မှ ပို့ကုန်ရငွေများ အပြည့်အဝ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြား
လာပါသဖြင့် ယခင်ကုမ္ပဏီ(၂၉)ခု အစားကုမ္ပဏီ(၂၁)ခုစာရင်းအား သိရှိနိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမည်/
7 Green Hardwood Enterprise Ltd. U Khin Maung Lay 0140
8 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd. U Soe Yin 25250
9 J & M Steel Solutions Co.,Ltd. Mr.Yasuhisa Miwa 32182
10 Kyaw San Co., Ltd. U Kyaw Oo 17343
11 Lighthouse Enterprises Ltd. Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin 3187
12 Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd. Mr.Wang Xiaowei 23414
13 Myanmar Rice Trading Co., Ltd. U Thant Zin 14014
14 Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd. Mr.Zhang Dongsong 24906
15 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint 21154
16 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd. U Sai Win Hlaing 16348
17 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay 21108
18 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein 43124
19 Thein Than Kyei Sin Co, Ltd. U Kyin Sein (a) U Kyi Sein 24090
20 Trade Friends Trading Co.,Ltd. Daw Shin Shin Nyein 25966
21 Win & Win Co., Ltd. U Win Swe 12394
Read more about (၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၂၁)ခုစာရင်း
(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၂၉)ခုစာရင်း
Wed, 06/19/2019 - 06:32 -- ictuser
1 A S O Co., Ltd. Daw Phyo Wai Wai Ei 34903
2 Arkar Oo Co., Ltd.
3 Aung Naing Thitsar Co., Ltd. U Aung Zaw Oo 19674
4 Cornerstone Resources (Myanmar) Ltd. U Swe 13417
5 Fine Ply Myanmar Private Ltd. Mr.Ashok Garg 32835
6 Global Moving And Storage Ltd. U Rudra Kumar 34865
7 Golden Lace Co., Ltd. U Thaung Win 16551
8 Green Hardwood Enterprise Ltd. U Khin Maung Lay 0140
9 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd. U Soe Yin 25250
10 Green Signal Co.,Ltd. U Myint Thein @ Guru Sami 32949
11 J & M Steel Solutions Co.,Ltd. Mr.Yasuhisa Miwa 32182
12 Kaung Ya Nant International Trading Co., Ltd. U Nay Myo Oo 22992
13 Kyaw San Co., Ltd. U Kyaw Oo 17343
14 Lighthouse Enterprises Ltd. Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin 3187
15 Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd. Mr.Wang Xiaowei 23414
16 Myanmar Rice Trading Co., Ltd. U Thant Zin 14014
17 Myanmar Tasaki Co., Ltd. Mr.Miyoshi Ueda 14768
18 Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd. Mr.Zhang Dongsong 24906
19 Myanmar Yang Tse Copper Limited. Mr.Geng Yi 26884
20 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint 21154
21 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd. U Sai Win Hlaing 16348
22 Super Soe Co., Ltd. U Soe Lwin @ U Karamu 0521
23 Texchem Food (Myanmar) Ltd. Mr. Masayuki Sugino 34986
24 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay 21108
25 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein 43124
26 Thein Than Kyei Sin Co, Ltd. U Kyin Sein (a) U Kyi Sein 24090
27 Trade Friends Trading Co.,Ltd. Daw Shin Shin Nyein 25966
28 Win & Win Co., Ltd. U Win Swe 12394
29 Yong Xin Industries Co., Ltd. U Han Yone Mo 24436
Read more about (၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၂၉)ခုစာရင်း
(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၃၅)ခုစာရင်း
Thu, 06/13/2019 - 03:38 -- ictuser
၂၀၁၂ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့်၂၀၁၅ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေအခန်း(၁၁)၊ပုဒ်မ၃၈-ခတွင်မည်သူမျှပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကိုသတ်မှတ်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိယင်း၏ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်
နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်တာဝန်ရှိပါသည်။
မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမည်/ ဒါရိုက်တာအမည် ပသကအမှတ် မှတ်ချက်
2 All States International Co., Ltd. U Maung Maung Tin 1031
3 Arkar Oo Co., Ltd. U Myo Lwin 11518
4 Asia Myint Group Co., Ltd. U Aung Aung Myint 23203
5 Aung Kyun Thar Co., Ltd. U Soe Kyin 2604
6 Aung Naing Thitsar Co., Ltd. U Aung Zaw Oo 19674
7 Cornerstone Resources (Myanmar) Ltd. U Swe 13417
8 Fine Ply Myanmar Private Ltd. Mr.Ashok Garg 32835
9 Global Moving And Storage Ltd. U Rudra Kumar 34865
10 Golden Lace Co., Ltd. U Thaung Win 16551
11 Green Hardwood Enterprise Ltd. U Khin Maung Lay 0140
12 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd. U Soe Yin 25250
13 Green Signal Co.,Ltd. U Myint Thein @ Guru Sami 32949
14 J & M Steel Solutions Co.,Ltd. Mr.Yasuhisa Miwa 32182
15 Kaung Ya Nant International Trading Co., Ltd. U Nay Myo Oo 22992
16 Kyaw San Co., Ltd. U Kyaw Oo 17343
17 Lighthouse Enterprises Ltd. Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin 3187
18 Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd. Mr.Wang Xiaowei 23414
19 Myanmar Green Ocean Trading Co., Ltd. U Ye Myint 21056
20 Myanmar Rice Trading Co., Ltd. U Thant Zin 14014
21 Myanmar Tasaki Co., Ltd. Mr.Miyoshi Ueda 14768
22 Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd. Mr.Zhang Dongsong 24906
23 Myanmar Yang Tse Copper Limited. Mr.Geng Yi 26884
24 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint 21154
25 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd. U Sai Win Hlaing 16348
26 Super Soe Co., Ltd. U Soe Lwin @ U Karamu 0521
27 Texchem Food (Myanmar) Ltd. Mr. Masayuki Sugino 34986
28 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay 21108
29 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein 43124
30 Thein Than Kyei Sin Co, Ltd. U Kyin Sein (a) U Kyi Sein 24090
31 Trade Friends Trading Co.,Ltd. Daw Shin Shin Nyein 25966
32 Tun Myat Thu International Co.,Ltd. U Kyi Lwin 21685
33 Win & Win Co., Ltd. U Win Swe 12394
34 Yong Xin Industries Co., Ltd. U Han Yone Mo 24436
35 Yu Wai Yan Trading Co., Ltd. U Sai Aung Min Latt 23759
Read more about (၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၃၅)ခုစာရင်း
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် (၆)လကျော်ကြာသည့်တိုင် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၃၅)ခုစာရင်း
Thu, 06/06/2019 - 06:29 -- ictuser
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ/
ဒါရိုက်တာအမည် ပသကအမှတ် မှတ်ချက်
1 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein 37653
2 Ba Oh Family Manufacturing Co., Ltd. U Si Thu Win 26678
3 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo 40344
4 Fudak Enterprises Co., Ltd. U Kyin Khin 4303
5 Golden Battery Recycling Co., Ltd. U Zaw Lin Tun 38374
6 Green Mast Trading Co., Ltd. U Soe Aung 14150
7 Hanuman International Trading
Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @ Mg Myint 37221
8 Honda (Myanmar) Int'l Co., Ltd. U Naing Naing Win 3315
9 Kaung Ko Group Co., Ltd. Daw Moe Moe Myat Ko 23209
10 Kaung Paing Chu Co., Ltd. U Htay Win 17636
11 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin 42066
12 Main Stream Trading Co., Ltd. U Htin Kyaw 22987
13 Mann Chaung Co., Ltd. U Myint Kyaw 30555
14 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye 39279
15 Mya Thiri Trading Co., Ltd. U Maung Maung 2934
16 Myanmar Beans & Timber Trading
Co., Ltd. U Naing Min Soe 27007
17 Myanmar Brewery Ltd. U Soe Thein 41960
18 Myanmar Golden Bridge Gems Co., Ltd. Daw Myo Aye Aye Tint 25883
19 Myanmar Ocean Star Co., Ltd. U Kyaw Htwe 27129
20 Myanmar Yang Tse Copper Ltd. Mr.Geng Yi 26884
21 Na Rain Dara Co., Ltd. Daw Hla Hla Win 32452
22 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi 39150
23 Northern Tiger Trading Co., Ltd. Daw Moe Moe Than 21067
24 Northwood Industry Ltd. U Han Zaw Lin 38179
25 Nova Lifestyle Holdings Co., Ltd. U Pye Phyo Tay Za 34916
26 Nyi Paung Export & Import Co., Ltd. Daw Sanda Aye 18029
27 Polysack Myanmar Co., Ltd. Natthi Cholasipant 32740
28 Ruby Tiger Timber Ltd. U Tun Maung 37179
29 Saung Hnin Cherry Co., Ltd. U Aung Naing Oo 35802
30 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin 37928
31 Shwe Yati San Co., Ltd. U Thet Min Htut 40811
32 Super Golden Crab Co., Ltd. Daw Set Yin 38211
33 Thein Than Htun Manufacturing Co., Ltd. U Thaung Myint 26705
34 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung 33983
35 U Kaung Trading Co., Ltd. U Thar Oo 25901
Read more about ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် (၆)လကျော်ကြာသည့်တိုင် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၃၅)ခုစာရင်း
Whole Sale/Retail ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ